Street Photography ရိုက်စဉ် ဘာလို့ chimping မလုပ်သင့်သလဲ? – Featured Collectives
Chimping ဟာ ဒီဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုလိုပါပဲ။ Chimping ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ပြီးတိုင်း ကင်မရာရဲ့ LCD ကို ပြန်ကြည့်တာကို ခေါ်တာပါ။ ဘာလို့ chimping လို့ ခေါ်တာလဲ။ ပုံကောင်းတစ်ပုံ ရတယ်လို့ တွေးကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ တခြားသူတွေကို ပြမယ်။ ကင်မရာရဲ့ LCD ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး “အိုး အိုး အိုး” ဆိုပြီးပြတယ်။ ချင်ပန်ဇီတစ်ကောင်လိုပေါ့။ Street photography မှာ chimping ဟာ ဘာလို့မကောင်းတာလဲ။ ဆောင်းပါးကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် chimping ဆိုတာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ပြီးပြီးချင်း ကင်မရာ LCD ကို ပြန်ကြည့်တာကို ခေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံသမား ၉၉ရာခိုင်နှုန်း လုပ်တဲ့အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ သဘာဝလည်းကျပါတယ် (ရိုက်တဲ့ပုံကို ချက်ချင်းပြန်ကြည့်လို့ရတဲ့ နည်းပညာရှိနေမှတော့ ဘာလို့ပြန်မကြည့်ဘဲနေမလဲ)။ စတင်ကာစ street photographer တွေအနေနဲ့ exposure နဲ့ အခြား technical settings တွေ မကျွမ်းကျင်သေးခင်မှာ LCD ကိုပြန်ကြည့်ဖို့တော့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလယ်အလတ်အဆင့် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်အဆင့် ဓာတ်ပုံသမားတွေအတွက်တော့ ပြန်ကြည့်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ Street photography မှာ ဘာလို့ chimping မလုပ်သင့်ရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်အချို့ကို အောက်မှာဖတ်ကြည့်ပါ။
၁။ အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့်အခိုက်အတန့်ကို လွတ်သွားနိုင်တယ်
ကျနော်လည်း မကြာခဏ chimping လုပ်ပါတယ်။ Chimping ဆိုတာ ဘာလဲမသိခင်ကတည်းကပေါ့။ တစ်ခါမှာတော့ ဓာတ်ပုံအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကို LCD ကြည့်နေလို့ လွတ်မလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုပြန်ကြည့်နေတုန်း ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မော့ကြည့်ဖို့ ပြောပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ပုံစံနဲ့လူတစ်ယောက်ကို ရောင်ပြန်ရှပ်အင်္ကျီ၊ နေကာမျက်မှန်၊ အမှိုက်အိတ်တို့ကိုင်ပြီး ကျနော့်ဆီ လျှောက်လာတာချက်ချင်းတွေ့လိုက်ပါတယ်။ ချက်ချင်း ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဓာတ်ပုံဟာ ကျနော့်အကြိုက် street ပုံတွေထဲက တစ်ပုံဖြစ်လာပါတယ်။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းသာ သတိမပေးခဲ့ရင် ဒီအခိုက်အတန့်ကို လွဲချော်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေထဲမှာလည်း chimping လုပ်လေ့လုပ်ထရှိရင် ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုး ကြုံတွေ့ဖူးမှာပါ။
၂။ မလိုအပ်တဲ့ ဖိအားပေးတယ်
Chimping လုပ်တဲ့အခါ ရိုက်တဲ့ပုံတိုင်းက ပုံကောင်းတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ထားရှိဖို့ မှားယွင်းတဲ့ စိတ်အခြေအနေပါ။ ကျနော့်အတွက် တစ်နေကုန် ဓာတ်ပုံထွက်ရိုက်လို့ ပုံကောင်း တစ်ပုံ သို့မဟုတ် နှစ်ပုံရရင် ကျေနပ်စရာပါပဲ။ အွန်လိုင်းမှာပါ မျှဝေလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ ပုံကောင်းတစ်ပုံလောက်ရရင် ပိုပြီးကံကောင်းတယ် ဆိုရမှာပါ။
ဒါကြောင့် ဒီဖိအားကို မယူပါနဲ့။ ဓာတ်ပုံထွက်ရိုက်တဲ့အခါ ပုံကောင်းရိုက်နိုင်အောင်သာ အာရုံစိုက်ပါ။ အိမ်ပြန်ရောက်မှ ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ပါ။
၃။ မိမိရဲ့ flow ကို ပျက်စေတယ်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ညစာစားရင်း စကားကောင်းနေတုန်း သူငယ်ချင်းဆီကို text တစ်စောင် ဝင်လာတာ ကြုံဖူးပါသလား။ ကြုံဖူးရင် ဘာဆက်ဖြစ်သလဲ။ သူငယ်ချင်းက “ခဏလောက်” လို့ပြောပြီး ဖုန်းကို ကြည့်မယ်။ စာပြန်ပို့မယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ကိုယ့်ဘက်ပြန်အာရုံစိုက်ပြီး “ဆောရီး၊ ခုဏကပြောနေတာ ဘာပါလိမ့်” လို့ ပြောမယ်။
အလားတူ street photography မှာ တွေးကြည့်ပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်း chimping လုပ်ရင် မိမိရဲ့ flow ကို ပျက်စေပါတယ်။ Street photography ရိုက်နေတုန်းမှာ flow ရဖို့က တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် flow ကို အပျက်ခံမလဲ။ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်း ရိုက်တာကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ ပုံတွေကိုတည်းဖြတ်တဲ့အခါ (အကောင်းဆုံးကို ရွေးတဲ့အခါ) နဲ့ post-processing လုပ်တာတွေကို အိမ်ပြန်ရောက်မှသာလုပ်ပါ။
၄။ ဘက်ထရီ ကုန်စေတယ်
Street photography ရိုက်နေတုန်း chimping မလုပ်သင့်တဲ့ နောက်ထပ် လက်တွေ့ကျတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ဘက်ထရီ ကုန်စေလို့ပါ။ Leica M9 နဲ့ Fujifilm X100 စတာတွေဟာ ဘက်ထရီအကုန်မြန်တတ်ပါတယ်။ ကင်မရာ LCD ကို တစ်နေ့လုံး အသုံးပြုနေပါက ဘက်ထရီ နှစ်လုံးလောက် လိုပါလိမ့်မယ်။ Chimping မလုပ်တော့တာနဲ့ ကျနော် တစ်နေ့လုံးကို ဘက်ထရီတစ်လုံးနဲ့ ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
၅။ ပုံကောင်းတွေကို ဖျက်မိသွားနိုင်တယ်။
Kramer O Neill – shot with film
ဓာတ်ပုံရိုက်နေစဉ် chimping လုပ်ရင် “မကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံ”တွေကို ဖျက်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံတွေမဖျက်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကို ချက်ချင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါ မကောင်းဘူးလို့ ထင်မိပေမယ့် အိမ်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါအ ပုံကောင်းတစ်ပုံဖြစ်နေတာကို ကျနော်အကြိမ်ကြိမ် ကြုံဖူးပါတယ်။ ကင်မရာ LCD ဟာ ပုံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ (composition) နဲ့ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာ (content) တို့ကို အကဲဖြတ်ဖို့အတွက် အရွယ်အစားသေးလွန်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက် အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိ စောင့်သင့်ပါတယ်။
အချို့သော street photographer တွေဟာ ဝါးနေတဲ့ ပုံတွေ သို့မဟုတ် focus မမိတဲ့ ပုံတွေကို အလိုအလျောက်ဖျက်မိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Daido Moriyama ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို လေ့လာရင် သူရဲ့ နာမည်ကျော်ပုံအချို့ဟာ focus မမိတာ၊ သို့မဟုတ် ဝါးနေတာ သို့မဟုတ် နှစ်ခုလုံးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
၆။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပိုခံစားရမယ်
ကျနော် street photography ထွက်ရိုက်တဲ့အခါ ရိုက်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို နှစ်သက်ပါတယ်။ ဘဝရဲ့ သေးငယ်တဲ့ အရာတွေကို ခံစားဖို့၊ လမ်းပေါ်မှာ အခြားလူများနဲ့ တွေ့ကြုံ ဆက်ဆံဖြစ်တာ၊ နောက်ဆုံး အိမ်ကနေ အပြင်ကို ထွက်ဖြစ်တာ စတဲ့ အခွင့်အရေးပေးပါတယ်။
Street photography မှာ နောက်ဆုံးရတဲ့ ပုံဟာ အဓိကကျတယ်လို့ကျနော်မယုံကြည်ပါဘူး။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပေမယ့် ရိုက်ကူးရတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ကျနော်ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြင်ထွက်ရိုက်တဲ့အခါ street photography ဟာ နှစ်သက်ဖွယ်ရာ၊ ပျော်စရာ ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။
၇။ ဖလင်ကင်မရာ သုံးဖို့မလိုပါဘူး
ကျနော်ဟာ street photography ကို ဖလင်နဲ့ရိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် (ဖလင်နဲ့ရိုက်တာဟာ exposure, composition စတာတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်) ဖလင်နဲ့ရိုက်တာဟာ street photographer ၉၅ရာခိုင်နှုန်းအတွက် မလိုအပ်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ဖလင်နဲ့ရိုက်တာကို ဘာလို့နှစ်သက်ရတာလဲဆိုတော့ ရိုက်ပြီးပြန်ကြည့်လိုစိတ်မဖြစ်လို့ပါ (ပြန်လည်းကြည့်လို့မရပါဘူး)။ ကျနော်သိတဲ့ street photographer တွေ ဒီဂျစ်တယ်ကနေ ဖလင်ပြောင်းရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကူးမှုအပိုင်းကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်စေပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်နဲ့ရိုက်ပေမယ့် ရိုက်ပြီးတိုင်း LCD ကို ပြန်မကြည့်တဲ့ စိတ်ခွန်အားရှိရင် ဖလင်ကင်မရာကိုင်မှရတဲ့ အားသာချက်ကို သင်ပိုင်ဆိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၈။ မိမိရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ယုံကြည်ဖို့ သင်ယူရာရောက်ပါတယ်
ကျနော့်ကင်မရာဟာ ကျနော့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ မျက်စိရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ မိမိရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ယုံကြည်ဖို့နဲ့ ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ဖို့အတွက် သင်ယူရပါတယ်။ မိမိကင်မရာကို ယုံကြည်ပြီး settings တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်သိပ်မပူပါနဲ့။ ကင်မရာမှာ မိမိနဲ့သင့်တဲ့ settings (Av-mode, P mode, manual) ကိုထားပြီး ဓာတ်ပုံကိုသာ ရိုက်ပါ။
၉။ ဘာအကြောင်းနဲ့မှ ကြည့်ဖို့မလိုပါဘူး
Chimping လုပ်ရတဲ့ တကယ့်အကြောင်းရင်းကို စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ အောက်က အကြောင်းတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
က) Exposure မှန် မမှန် ကြည့်ချင်တယ်
ယခုအခါ RAW နဲ့ရိုက်ရင် exposure အတိအကျ မှန်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ Exposure ဟာ အရေးကြီးပေမယ့် ဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့ ကောင်းတဲ့ composition ရဖို့ဟာ ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ငြင်းချင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဟာ one stop သို့မဟုတ် two stop overexposed သို့မဟုတ် underexposed ဖြစ်တယ်ဆိုရင် post-processing မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်။
ခ) Focus ဖြစ် မဖြစ် ကြည့်ချင်တယ်
Zone Focus စနစ်နဲ့ရိုက်ရင် focus ဖြစ် မဖြစ် စိတ်ပူဖို့မလိုပါဘူး။ ငယ်တဲ့ f-stop (f/11 – f/16) သုံးရင် focus မမိတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ဂ) ဓာတ်ပုံ ဝါး မဝါး ကြည့်ချင်တယ်
Shutter speed ကို 1/320 second နဲ့ အထက် ပိုမြန်တာထားရိုက်ရင် ဓာတ်ပုံတွေ မဝါးနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် “မတော်တဆ”ဝါးသွားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက ပုံကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဃ) ပုံတွေကို အမြတ်တနိုး ပြန်ကြည့်ချင်တယ်
၁၀။ သူငယ်ချင်းတွေကို မိမိဘာသာ chimping လုပ်တာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး “စ”နိုင်ပါတယ်
Photo by Brian Bonitz
ကျနော်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဓာတ်ပုံထွက်ရိုက်တဲ့အခါ တစ်ယောက်ယောက်က chimping လုပ်ပြီဆိုရင် အပျော်သဘော အားလုံး ဝိုင်းပြီး ချင်ပန်ဇီကို ငှက်ပျောသီးပေးသလို စနောက်ကြပါတယ်။
Chimping လုပ်တာကို လျှော့ချင်ရင် ပထမအဆင့် ကင်မရာ LCD က preview ကို ပိတ်ပါ။ ဒုတိယအဆင့် ရိုက်ပြီးတိုင်း ပြန်ကြည့်ချင်စိတ်ကို လျှော့ပါ။ တစ်နေ့လုံး မကြည့်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ နောက်တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်း LCD ပြန်မကြည့်တာကို အကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ဒါဟာ အင်မတန်ခက်ပေမယ့် မိမိမျက်လုံးတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ဖို့ ပိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Eric Kim ၏ “10 Reasons Why You Should Never Chimp While Shooting Street Photography” ကို ဆီလျော်အောင် မြန်မာပြန်သည်။
မူရင်းကို http://erickimphotography.com/blog/2011/10/24/10-reasons-why-you-should-never-chimp-while-shooting-street-photography/ တွင် ဖတ်နိုင်သည်။
Eric Kim သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ street photographer တစ်ဦးဖြစ်ပြီး http://erickimphotography.com/blog/ တွင် street photography နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးများ၊ အင်တာဗျူးများကို ရေးသားနေသူဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ခံချက်။ ။ Myanmar Street Photographers တွင် THT ရေးသားခဲ့သော Street Photgraphy ရိုက်စဉ် ဘာလို့ chimping မလုပ်သင့်သလဲ? ဆောင်းပါးအားပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။